2- Fiaraha-monina sy tokan-trano
Alohan'ny ananganana orinasa, dia mifampiresaha tsara amin'ny vady aman-janaka, na ny fianakiavana miara-monina. Tsy fanapahan-kevitra samy irery izany ny fananganana orinasa, satria hisy fiantraikany amin'ny fiainan-tokatrano sy ara-piaraha-monina.
Ny ankizy efa zatra nandeha vacances sy nitsangatsangana ny week-end, nefa dia noho ny orinasa natsangana dia mety tsy hisy intsony izany, indrindra eo ampiandohana. Ny vola ao an-trano ivoaka toa ny rano, mety misy aza ny karamam-bady no entina anetsenana ny banga, izay hampiteraka ady izany.
3- Inona ny bizinesy atao
Fanontaniana mipetraka hatrany io, inona ny sera mandeha, iza no azahoana tombony malaky.
Aza mitady zavatra sarotra na lavitra be. Apetrao ny fanontaniana, inona ny zavatra tianao sy hainao. Aza manao sera tsy tianao na tsy hainao. Raha tiana nefa tsy hay, dia hianaro ilay asa.
Aza mijery ny hafa hoe mandeha ny an'ny namana dia hanao toa iny koa, nefa ilay sera tsy tianao na tsy hainao.
4 - Inona no tsena na ny mpanjifa ilay zavatra atao na amidy
Ao ny sera izay mifototra amin'ny filan'ny olona, misy kosa ny tsena izay tsy mbola fantatry ny olona na tsy mahazatra ny olona ny fisiany, fa anjaranao ny mampahafantatra ilay zavatra, na atosikao ny olona anjifa azy (Création de besoin). Mila publicité na fampahalalana matetika ity farany ity.
5- Aiza no ahita vola iaingana
Fanontaniana mipetraka ary lasa sakana matetika io tsy fisian'ny vola io.
Hitrosa amin'ny banky, nefa toa tsy mahazo, hitrosa amin'ny micro-finance, lasa antoka ny fananana rehetra, ny atao antoka ihany koa tsy misy sady lafo ny zana-bola alainy. Hitrosa amin-kavana na amin'ny namana, tsy misy matoky.
Aza atao sakana amin'ny fandinihana ny zavatra tiana atao ny tsy fananam-bola, ireo mpanefoefo aza tsy nanana teo ampiangana, tsy voatery mpandova vao tafita.
Afaka atao ny mijery mpamatsy entana, izay omena avance ka rehefa lafo ny entana vao aloa ny azy, misy orinasa hafa ihany koa afaka hiaraha-miasa amin'ny service omeny, misy ihany koa ny client mihitsy no akana avance amin'ny famatsiana asa tiany hatao. Hita io indrindra amin'ny asa tanana na Travaux.
6- Ireo fepetra arahina
Manao zavatra ara-dalàna hatrany, manangana orinasa, na maka patente any amin'ny foiben-ketra, na manangana société na Unipersonelle, izany hoe ianao irery ihany no manana petra-bola ao, na SARL société à responsabilité limitée, izany hoe misy olona roa farahafakeliny miara-miasa mitondra petra-bola. Ka arakaraky ny vola entiny, no andraikitra tazoniny sy ny fanapahan-kevitra raisina, eny hitsinjara arakaraky ny tahan'ny vola nentina ny tombom-barotra na ny fatiantoka ho an'ny tsirairay.
7- Manaova zavatra tsara hatrany
Tombony lehibe miohatra amin'ny mpifaninana aminao ny atsaran'ny asa. Ny tsara tsy mba mora, sady azahoanao tombony izany, no andeha mora kokoa ny fampahalalana anao satria ireo mpanjifa afa-po hilaza amin'ny namany, izay ireo mpanjifa afa-po ireo izany no lasa agent commercial ho anao, nefa tsy aloanao vola izay publicité ataondreo ho anao izay, ary izy no mandresy lahatra lavitra ny namany toy izay ny publicité ataonao.
Arakaraky ny sera atao, fa manantona hatrany ireny tranom-piantohana ireny, fa maro ireo tolotra sy tsirin-kevitra ho azonao amin'izy ireny.
Ianao tompon'ny orinasa misy fiantohana betsaka azony omena anao, ny asanao maro ny fiatohana mety azo atao.
Betsaka ny mihevitra fa vola laniana izy ireny, nefa iny no miantoka ny patsa iray tsy omby vava, mety hisy ny loza, mety hisy ny fahafatesana tampoka, mety hisy ny zavatr'olona simba teo ampikarakarana azy, eo no ilana ny fiantohana efa noeritreretina mialoha.
9- Fiofanana sy fitantanana
Dingana lehibe ny fahaizana mitantana orinasa, ny famaritana ny vola mety ho lany, ny vola miditra, ny famerana ny vidin'entana amidy, ny fifampiraharahana amin'ny banky...
Misy ireo orinasa manana traikefa manokana momba izany, aza misalasala mianatra, afaka manantona ireny Chambre de commerce na Chambre de l'industrie et de l'artisanat ireny koa, fa betsaka ny programam-piofanana amin'ireny.
10- Vitatsika Consulting
Afaka manampy anao amin'ny fananganana ny orinasanao, mikarakara sy manampy anao amin'ny taratasim-panjakana rehetra. Afaka mampanofa adresse foiben-toerana ho anao, na siège na domiciliation, mandray ny taratasinao rehetra, manao ny facture nao rehetra, izany hoe raha tsy manana société ianao, dia ny Vitatsika Consulting no manao ny facture nao, mandray ny vola any amin'ny banky, ny chèque sy virement ary manome ny anjaranao ho anao.
Afaka manao ny fampiofanana sy manoro hevitra anao amin'ny fitantanana ny orinasanao, afaka manao ny comptabilité nao, ka hifantoka amin'ny asanao ianao.